Mba fantatrao ve ny Fosa ?
Ny fosa no biby mpihaza lehibe indrindra any Madagasikara- Mirefy 1,5 metatra ary milanja hatramin’ny 12kg.
Sady biby mahintsy no mailaka- Ny bikabikany dia toa saka nefa kosa dia hafa kely- Any Madagasikara irery ihany no ahitana azy- Ny biby iray razambe taminy any amin’ny firenena hafa dia efa saiky lany taranaka avokoa.
Ny ala no toerana iainany.
Ny filana kitay sy saribao- ny fanaovana tavy ary ny filana tanety hiompiana omby no antony lehibe andorona ny a la sy ikapana ny hazo. Efa kely dia kely sisa ny ala ananatsika- Na izany aza dia mitohy ihany ny fanimbana noho ny antony ara-bola.
Mihena ny ala ary miha lany taranaka miaraka aminy ny biby amamborona. Raha ny fosa ohatra no raisina dia eo amin’i 2500 sisa tavela- Saiky tsy hita intsony izy ireny- Any amin’ny ala voaharo toa Kirindry ao Morondava no mbola ahitana azy tsindraindray. Bezaka ny ezaka atao mba hitahirizana ity fossile vivant ity. Ny fampitomboantaranaka azy any amin’ny Zoo ohatra (Zoo Duisburg- Allemagne ohatra)- Ny fahombiazana anefa dia miankina amintsika ihany
Last Updated (Wednesday, 08 December 2010 18:23)